Hargaysa: Shaqaale dowlad oo la xiray - BBC Somali
Hargaysa: Shaqaale dowlad oo la xiray
2 Febraayo 2014
Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Somaliland Cali Maxamed Warancadde, ayaa BBC u sheegay maanta in boliiska Somaliland shalay goor danbe ku qabteen gegida dayuradaha ee Hargeysa saddex qof oo ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaliya, iyagoo doonayay ayuu yiri inay si dhuumasho ah ku soo galaan magaalada Hargeysa.
Wasiirku wuxuu sheegay in saddexda sarkaal oo haatan ku xiran saldhig boliis ay diyaarad ka soo raaceen magaalada Muqdisho oo ku ekeyd Hargeysa.
Saddexda sarkaal sida uu sheegay wasiirku waxay kala yihiin, Jaamac Maxamed jaamac oo ah madaxa baratakoolka ee madaxtooyada dowladda Soomaaliya, Fahiima Nuur Nageeye oo ka tirsan xafiiska Ra'iisalwasaaraha Soomaliya, iyo Cabdicasiis adam oo ah dibloomaasi ka tirsan Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Soomaaliya.
Cali Warancadde, wuxuu sheegay in maxkamad la horgeyn doono masuuliyiintaasi marka baadhista boliisku dhammaato. Wuxuu sheegay in aan sharciga Somaliland ogoleyn qof xil ka haya dawladda Soomaalilya inuu soo galo Somaliland.